Nahoana no mankany Eoropa amin'ny lohataona?
Ny fifaliana amin'ny fialantsasaka amin'ny lohataona any Eorôpa
Ny lohataona any Eoropa - mora kokoa noho izany!
Ny fotoana mahafinaritra dia fotoana mahafinaritra mankany Eoropa. Azo antoka, mety hahazo orana kely ianao, saingy misy arcades mahazendana ahafahanao mandeha eo ambany fiangonana sy ny fiangonana mba hisambotra, toy ilay voalaza etsy ambony. Raha tsy izany, dia mazava ho azy fa ny sary dia mazàna, ny legioma lohataona dia manavaka, ny voninkazodia dia manonofy, ary ianao dia hovakianao ny zava-drehetra ao anatin'ity torolalana ilazana an'i Eoropa ity amin'ny lohataona.
Ny olana dia rehefa mamaky lahatsoratra aho momba ny fandaniana ampahany amin'ny vanim-potoana tsy misy any Eoropa. Mahagaga ahy foana ny fifantohan-tsaina. Adidin'ny mpamonjy vola foana - ary tsy misy hafa amin'izany. Azafady, fa raha te hanangom-bola fotsiny ianao, mijanona ao an-trano, mihinana sakafo mora, miasa mafy, manamboatra ny alika, mividy solika dite. Tsy mivazivazy aho. Eny ary, mikasika ireo derivatives havoakan'ny dokotera aho - ary tena tsy tokony hampirisika ny vondrona ara-bola be mpividy vola izay nahita fomba iray hanaovana fitaovana filokana avy amin'ny hetraketraky ny olona sy ny zava-mitranga ateraky ny fihenan'ny toe-karena izay handoavantsika taona maro fa ... ahem, fa, amin'ny lafiny rehetra, dia ireto ny bala amin'ny bala MSNBC misesisesy amin'ny mety ho mpizahatany amin'ny antony 5 hitsidihana an'i Eoropa amin'ny lohataona:
Vidiny mora kokoa
Mora kokoa ny hotely
Mora kokoa ny mividy fiara amin'ny vidin'ny bargain .
Tsy feno ny tranombakoka (maninona no tsy mora kokoa izy ireo ?)
Ary farany fa tsy ny kely indrindra, ny Eoropeana dia trano. (Inona? Mazava ho azy fa tsy misy mpizahatany manakombom-bava ny arabe sy ny toeram-pisakafoany ankafiziny ary ankehitriny ny fotoana ahafahan'izy ireo mihinana sy milalao am-pilaminana - ary mora kokoa izany .)
Mazava ho azy fa marina izany. Angamba ny lohataona no fotoana tsara hanaovana vakansy any Eorôpa raha toa ianao iray amin'ireo olona manam-pahalalana ireo izay tsy dia manadino ny miala amin'ny tranom-bakoka mankany amin'ny tranom-bakoka amin'ny fotoana iray izay mampatahotra ny hamoaka ny faritry ny thermometer. Raha ianao ary nandeha ihany ianao, dia ho hitanao fa feno olona ny tranombakoka. Eny, miaraka amin'ireo mpizahatany manosika, ny kely indrindra amin'izy ireo dia manontany tena ny amin'ny antony nisafidianany ny vanim-potoan'ny fahavaratra mba hahafantaran'ireo renirano an'i Renoir raha toa ka nanana ny fahatsapany ny handao ny tanàna ny vahoaka manontolo mpiantrano amin'ny alàlan'ny fandefasana zippily amin'ny fiarabe madinidiny any amoron-dranomasina. Any beach.
Avelao aho hanome toky anao fa misy tombony tena ilaina amin'ny dia amin'ny lohataona. Voninkazo ho an'ny iray. Efa nandre izany ianao. Angamba efa nividy azy ireo ho an'ny tantely mamy ianao raha misy daty tokony hohadinoinao tahaka ny fiaran-dalamby amin'ny alina (raha toa ka mieritreritra aho hoe lahy ianao).
Ny Eoropeana anefa dia manandratra ny voninkazo manetry tena ho amin'ny ambaratonga vaovao. Raha ny marina, teo anelanelan'ny taona 1634-1637 dia nisy sombin-koditra malemy miaraka amin'ny fananana tsy manam-paharoa mipetraka eo an-tampon'ny balafomanga manapotipotika (afaka manondrana jiro iray ho an'ny tany iray manontolo) izay nianjera tamin'ny ekonomia holandey nandritra ny taona maro. Tsara kokoa ny manala solika any amin'ny dite.
Androany, folo taona izay no nankalazain'ny Holandeana ny fahaizan'izy ireo marevaka amin'ny fety lehibe antsoina hoe Floriade , misy ny geraniums eo amin'ny varavarankely rehetra any Italia, ary i Frantsa dia manome vahana ireo vondrom-piarahamonina izay nanan-karena ny tanànany. Hitanao ireo famantarana milaza hoe: Ville Fleuri.
Azo inoana anefa fa tsy tonga ny voninkazo na ny ranom-boankazo. Angamba ianao tonga amin'ny voninkazodia. Hiresaka momba izany manaraka isika.
Flora sy Fauna - Avy amin'ny voninkazodro ho an'ny boka
Tsy azonao alaina sary an-tsaina hoe firy ny olona avy any ivelan'i Eoropa no ankafizin'ny eglizy Eoropeana. Mofo mena Eoropeana dia mena, tsy toy ny môtô Kalifornia, izay menamena. Noho izany dia gaga amin'ny vahoaka ny olona, ​​ary mijery ny zava-mahagaga eo amin'ireo toerana izay misy poppies karipetra ny ambanivohitra.
Raha mipetraka ao Lunigiana aho, dia ny tapakila fotsy mangatsiaka no misy ny crocus.
Ny volana Martsa koa no fotoana hamelana an'i Mimosa, mariky ny andron'ny Vehivavy iraisam-pirenena. Be dia be ny hazo fihinam-boa tamin'ny Martsa sy Aprily.
Tamin'ny faran'ny volana aprily dia nanomboka niroborobo ny tulipa any Holandy. Azo antoka, mieritreritra ny Holandey ianao rehefa mieritreritra tulips, indrindra fa any amin'ireo gardes Keukenhof , fa Floralia Brouillie mankalaza ny felam-boninkazo eo amin'ny lapa ao Groot-Bijgaarden izay ahitanao voninkazo mavomavo amin'ny voninkazo: "karazana 500 ahitana karazany 300 tulip".
Aprily sy Mey dia volana tsara indrindra hitsidihana ireo tempoly grika any Agrigento, Sicily. Mipoitra ny toetrandro, ny voninkazodia maniry, ary ny fizahan-tany dia kamo sy mafaitra.
Nitsangana ny Avaratra tamin'ny volana Aprily tany amin'ny alan'i Taiga any Central Finland . Ary noana izy ireo! Nefa afaka mahita azy ireo ianao hatramin'ny volana Jona raha toa ianao manana fahasambarana. Avrily any Scandinavia dia mitondra voninkazo lohataona, ary ny Aurora Borealis , ny "Northern Lights" dia hita hatramin'ny volana Aprily.
Any avaratr'i Angletera, afaka mahita ny fampisehoana ny Flower Flower ny Harrogate. Ireo mpamboly matanjaka dia mety maniry ny hanatrika ny fampisehoana "Chelsea Flower Show" - Fampisehoana tsara indrindra eto an-tany araka ny nolazain'i Ferne Arfin.
Ary aoka tsy ho adinontsika i Irlandy. ahoana ny momba ny fandaminana ny fitsangatsanganana mankany amin'ny National Irish Stud sy ny Gardens Japoniana, Tully (County Kildare) ? Tsy misy zavatra toy ny kibay, zaridaina ary trano fisakafoanana iray mba hahazoana ilay rany taloha. Ary, ho toy ny bonus manokana ao amin'ny Zaridainan'i St. Fiachra ianao dia hahita "St. Fiachra, izay ahitana sarivongana any amin'ny farihy iray." Izy no mpiaro ny zaridaina ary manampy ireo izay voan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana. " Tsy te handiso izany ianao!
Mazava ho azy fa rehefa mandehandeha ny zaridaina, dia tsy afaka lavitra ny legiom-boankazo. Hiresaka momba azy ireo izahay manaraka.
Ny voankazo sy legioma any amin'ny tsena Eoropeana (sy ny fisakafoanana!)
Rehefa avy ririnina lava ririnina ny legioma marevaka, Romanina manantena ny fotsy mangidy antsoina hoe puntarella, endrika karazana akorandriaka, izay ririnina efa maitso miposaka any Lazio. Izy io dia ilay mpiray tampo amin'ny lohataona, miakanjo miaraka amin'ny menaka kely ary anchovy antsy.
Any amin'ny tsenan'ny lohataona Italiana dia hahita legioma mahazatra maro sy mahazatra ianao. Mbola hisy artichokes amin'ny lohataona, ary tsy hisy vidiny, fa maro karazana. Ny ankamaroanay dia ny artichokes jiro avy any Sicile sy Sardinia. Nivoatra izy ireo mba hanesorana ny ondry; Ny habetsahan'ny zavamaniry rehetra any Sardinia dia misy voalavo!
Ny mahagaga hafa dia ahitana ny fitiavantsika, agretti, ahitra manjavozavo izay sasao amin'ny menaka kely sy tongolo kely, manjavozavo raha toa ka misy sira mitovy amin'ny toerana nahaterahany. Misy ihany koa Cardona (cardoni amin'ny italiana, havanao amin'ny artichoke) ary ny lokon'ny lionona amin'ny sary antsoina hoe lampascione, tena karazana hyacinth iray manokana izay indray cucina povera, ny fihinanana ny mahantra, ary nanjary lasa Tsara tarehy toy ny latabatra misy any Puglia mitahiry "sottolio" na ambanin'ny solika.
Ity no Italianina, mazava ho azy, izay ahafantarako azy indrindra. Fa ny tsena hafa dia hanolotra ny fahaizany manokana manokana. Tonga eto an-tsainy ny saham-boankazo Frantsa, saingy tsy dia marim-pototra loatra, ny menaka maniry ao Aveyron dia miavaka sy matevina aloha kokoa noho ny zaridaina eny an-tanimboly.
Ferne Arfin avy any UK Travel dia mampahatsiahy antsika fa "ny volana Aprily dia manomboka ny fetin'ny faran'ny herinandro ao Vale of Evesham ao Worcestershire ao Cotswolds ny volana Avrily.
Eny, ny olona any Eoropa dia samy mankalaza ny tsiron-tsakafo , fotsy, maitso na maingoka rehefa mivoaka.
Manana ny fanahin'ny fanangonana ihany koa i Gresy ary maro amin'ireo voankazo tahaka ny an'i Italia, araka ny torolàlana momba ny Travel Travel deTraci Regula:
"Ao Gresy dia hisy horta lohataona ahafahana manangom-bokatra eny an-tsena, izay i yia-yias (grannies) mainty miaraka amin'ny kitapo plastika no manangona eny an-dalambe, ary mahagaga ny mpitondra fiara tsy mataho-dalana. Tsy misy eny an-tsena mihitsy izany. Ny spinach sy ny savoka ary ny voanio dandelion antsoina hoe Zohos dia tsy maintsy hiseho amin'ny latabatra na amin'ny "spinach" (spankopita), na dia sarobidy loatra aza ny asparagus fa matetika Tokony hozaraina amin'ny ankapobeny izy ireo. Ireo no heverina ho tena mahasalama indrindra - ny paikady dia tokony hiantoka ny fiheverana sy ny fahaterahan'ny zaza lahy salama manokana. "
Ary aza adino ny zanak'ondry. Ao amin'ny vozon'ny amboadia italiana dia tsy mikasika ny zanak'ondrin'ny lohataona fotsiny fotsiny akory, fa momba ny faritra ara-jeografika izay ahafahan'ny ondry mitombo. Zeri zanak'ondry ho anay, ny sasany amin'ireo zanak'ondry tsara indrindra nanandrana ahy.
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny toetran'ny lohataona any Italia ianao dia jereo ny: Travel Travel in Italy .
Mba hanararaotana ireo sakafo tsy manam-paharoa mety ho hitanao any amin'ny trano fisakafoanana, mila lakozia ianao. Azonao atao ny mahazo iray amin'ny ankamaroan'ny trano fialan-tsasatra.
Andeha isika hifindra any amin'io hazavana mamirapiratra io sy ny rahona matevina mamiratra izay manao sary manokana manokana.
Ny hazavan'ny jiro - fahafinaretana!
Maro ireo mpizahatany no nampiditra DSLR mavesa-danja manerana an'i Eoropa, manantena ny hisambotra an'io sary lavorary io. Raha mpaka sary momba ny tontolo iainana ianao, dia ho faly ianao fa nitsidika an'i Eoropa tany am-piandohana.
Azo antoka fa azonao atao ny maka sary tahaka izao amin'ny fahavaratra. Niezaka izahay. Rehefa mafana ny ranomasina ary mafana kokoa ny mari-pana amin'ny rivotra amin'ny alina, mangatsiaka ny ranomasina - ary tsy hahita ny ranomasina na ny tanànan'i Carrara saika mazava amin'ny sary nalaina tamin'ity halavirana ity . Ny lohataona sy ny fahalavoana (ary na dia ririnina) aza no tsara indrindra aminao.
Ny tara-masoandro maherin'ny tara-masoandro koa dia ny karazana hazavana ratsy kokoa ho an'ny ankamaroan'ny sary. Mampitodika ny olona izy, manamaivana ny vodin-tsofina rehefa manipy ny handrina amin'ny hazavana fotsy. Amin'ny lohataona dia mianjera ny "volamena volamena", ny fotoana izay mampamirapiratra ny hafanana sy ny fanasana ary ny fahatsapanao amam-pitiavana eo amin'ny sarinao, dia mihatra mialoha ny andro, toy ny hoe reraka avy amin'ny fitsangantsanganana ianao fa tsy hoe rehefa ' misaotra. Tsara kokoa ny sary tsara kokoa.
Hevero ho toy ny fotoam-pisakafoanana ny lohataona mety hisafidy ny hanao vakansy any Eorôpa. Ny pejy manaraka dia mety hanome vintana kely - izy ireo ny sasany amin'ireo sary tiako indrindra noraisina tamin'ny lohataona.
Tranoben'ny lohataona - Skeletons as Photo Picture Vacance
Azonao atao ny manamboatra hazo lohataona mba hanamboarana mistery amin'ny sary tahaka ny voalaza etsy ambony. Amin'ny fahavaratra dia tsy ho hitanao akory ny tilikambo fiarovana, fa amin'izao fotoana izao dia hita fa mistery izy ireo, fahitana avy amin'ny sarimihetsika mahatsiravina; iza no ao amin'ilay tilikambo, mifatotra amin'ny rindrina?
Kolontsaina Eoropa Atsinanana
Toro-hevitra momba ny safidy tsara indrindra ho an'ny fanjonoana any Eoropa Atsinanana
Alohan'ny handehananao mivarotra any Eoropa
Sakafo nentim-paharazana tany Eoropa Atsinanana
Ny fialan-tsasatry Litoania
Torolàlana ho an'ny trano fidiovana dimy ao Eorôpa
Viking Star sy Wellness Center
Rio Vista Park & ​​Rio Vista Recreation Center Map sy Directions
Toy Story Land tao amin'ny Hollywood Studios Disney
NY FIVORIAMBE: Farihin'i Austin Spa Resort
New York City Real Estate 101: Condos vs. Co-ops
Ahoana ny fahitana ny San Francisco Japantown
Oliva Oil vita tany Arizona tao amin'ny Queen Creek Olive Mill
Hahavory trano ho an'ny mpanjifany
Ny zavatra tsara indrindra atao any Los Cabos
Tsidiho ny Tradition Holiday Chicago: ZooLights ao amin'ny Zoo Lincoln Park
Suggérer de Sûreté manodidina Montreal: Sucrerie de la Montagne
Ny toerana mahatalanjona megalitika sy mialoha ny tantara ao Irlande